Ukulahlwa kwentela: kuyini, kungani kwenzeka futhi kusho ukuthini | Ezezimali Zomnotho
Kungenzeka ukuthi uke walizwa leli gama kwabezindaba, elihlobene nemiphakathi ezimele, iYurophu noma umhlaba wonke. Noma kungenzeka ukuthi awukaze uzwe ngokulahlwa kwentela ngaphambili.
Uma manje, kungenxa yokuthi ufuna ukwazi ukuthi sisho ukuthini, noma ngoba udinga ukwazi yiziphi izizathu ezenza abezindaba bakhulume ngokulahlwa kwentela, Uma ufuna ukucacisa lo mqondo, lapha silungiselele umhlahlandlela wokuxazulula konke ukungabaza okungavela.
1 Yini ukulahla
2 Kuyini ukulahla intela
3 Izintela Ezithintekayo Ngokulahla Intela
3.1 Intela yengcebo
3.2 Ukulandelana neminikelo
3.3 Izintela zemvelo
3.4 Intela ezimotweni ezidonsa ngomshini
3.5 Intela yempahla nempahla
4 Ngabe ukulahlwa kwentela kwenzeka kuphela eSpain?
Ngaphambi kokukhuluma ngqo ngokulahla intela, kufanele wazi ukuthi igama elithi ukulahla lisho ukuthini, ngoba livela esiNgisini kodwa linokuhumusha kweSpanishi. Ukulahla udoti kwaziwa njengokuthengisa ngokulahlekelwa noma ukuncintisana okungafanele. Kusho ukuthi inkampani, noma ibhizinisi, lithengisa ngaphansi kwentengo ejwayelekile, noma ngamanani angaphansi kwezindleko, ngoba inhloso yalo ukuqeda ukuncintisana nokwenza imakethe kube ngeyayo.
Ngaphansi kwemithetho yezohwebo yamazwe omhlaba, ukulahla is a "Ukuzijwayeza lapho inkampani isungula intengo ephansi yezimpahla ezingenisiwe kunezindleko zokukhiqiza inkampani enazo ezweni lapho lezo zimpahla zithunyelwa khona, kukhipha inkampani yendawo emncintiswaneni."
Ngamanye amagama, sikhuluma nge-a indlela yokwenza ibhizinisi ngendlela engafanele, kodwa ngokwe-World Trade Organisation ayinqatshelwe, yize inecala. Yize kunjalo, yize abaningi bekubheka "njengokubandlulula", abanye bakubona "njengokunikezwa nokufunwayo."
Kuyini ukulahla intela
Ngalokhu okungenhla, usuvele ungathola umbono wokuthi ukulahla intela kuyini. Esimweni esinjalo, Kuhlobene nezinkampani, futhi inhloso yalokhu ukonga kakhulu ngangokunokwenzeka ekukhokheni intela. Yingakho abaningi behlala emphakathini owodwa ozimele noma kwenye.
Ngalesi sizathu, Imiphakathi eminingi Ezimele ilwela ukunikeza izinkampani indawo engcono kakhulu, okungukuthi, lapho kufanele bakhokhe kancane. Ngamanye amagama, balungisa intela kubuncane obukhona ukuze banikeze izinzuzo ezengeziwe ezinkampanini uqobo.
Izintela Ezithintekayo Ngokulahla Intela
Ake sikhulume ngezintela manje. Njengoba sishilo ngaphambili, ukulahlwa kwentela kugxile ngqo enteleni. Umphakathi ngamunye we-Autonomous unamandla okuphoqa izintela ezahlukahlukene, hhayi lezo ezithinta izinkampani kuphela, kodwa nabantu. Isibonelo, icala leZwe laseBasque noma i-Navarra, "enezivumelwano" ezikhethekile, iMadrid, i-Andalusia ... Ngamunye ubeka intela ayifunayo futhi ethinta ukuthi inkampani ingadala le ndawo noma cha.
Kepha, iziphi izintela ezingancishiswa noma zikhuliswe ukwenza ukulahlwa kwemali? Lokhu yilokhu okulandelayo:
Kuyaziwa ngokuthi intela yemali enkulu. Futhi, uma unama-euro angaphezu kwezigidi ezimbili, usuvele kufanele uyikhokhe. Endabeni yezinkampani ezincane, ayikho inkinga, kepha uma inkampani inkulu futhi inemali engaphezu kwalezo zigidi zama-euro, ukukhokha le ntela akuthandi lutho, ngakho-ke baya ezindaweni lapho kungadingeki ukuthi bayikhokhe khona, noma ukhokhe imali encane kakhulu kunenye indawo.
Le ngenye yezintela ezithinta, futhi imiphakathi eminingi eSpain ilwa nayo ngoba abaningi banqume ukuyisusa. Futhi-ke, lokho kuyazuzisa ngamafa, ngoba akudingeki ukuthi bakhokhe lutho (yingakho abaningi beguqula indawo abahlala kuyo lapho isikhathi sifika).
Endabeni yezinkampani, kuyafana, ngoba kuyindlela yokuthi izindlalifa akudingeki zikhokhe noma yini lapho zithola okuthile (okuyinto eziswa njalo). Kusenemiphakathi eSpain enayo, eminye ngezindleko eziphansi, eminye ephezulu.
Manje sesibhekela intela yezimpahla zemvelo. Lokhu kusebenza kuphela ezinkampanini futhi ngokusho kwemiphakathi ezimele, eminye iyakuvumela ukwedlula eminye thola izimboni ezithile noma izinkampani ezingangcolisa kakhulu noma kancane. Futhi ngokuya ngezidingo.
Ngalesi sizathu, izinkampani zitholakala lapho, ngokwezezimali, kulula kakhulu kubo.
Intela ezimotweni ezidonsa ngomshini
Komasipala abaningi (ngoba nabo bayayiqoqa), ukuze babe nezinsizakusebenza eziningi endaweni, balinga izinkampani ngenani elincane kakhulu, noma ngezaphulelo lapho banezimoto eziningi enkampanini, okwenza kube nenzuzo enkulu ukuyibeka leyo ndawo kunenye.
Intela yempahla nempahla
Okokugcina, unentela yendawo nempahla. Lokhu kuqoqwa ngomasipala kepha, kuya ngokuthi ukutholakala kuphi, uzoba nezinzuzo eziningi noma ezingaphansi. Futhi asikhulumi ngokuncishiswa okuncane, kepha ngomehluko omkhulu ngokusho komasipala.
Ukuzivikela kwabo ukuthi ngandlela thile bakhuthaza izinkampani ukuthi zifune ukuthola indawo yabo, kepha Ukusebenzisa ukulahlwa kwentela kubonwa ngabaningi, njengomncintiswano ongafanele phakathi kwemiphakathi eSpain.
Ngamafuphi, singakhuluma ngemiphakathi uqobo ezinikela ngayo kanye nezinkampani ezifuna "umthengi ophakeme kunabo bonke" ukwenza inzuzo kusukela ekuqaleni komsebenzi wabo.
Ngabe ukulahlwa kwentela kwenzeka kuphela eSpain?
Ngeshwa Lo mkhuba wokulahla intela awusetshenziswa eSpain kuphela, empeleni, e-European Union kukhona namazwe amaningi ahlinzeka ngempatho enenzuzo ezinkampanini ezinkulu, yingakho abaningi bethuthela kulawa mazwe esikhundleni sokuhlala lapho bekhona.
Ukukunikeza umbono, ikomkhulu le-Apple eYurophu lise-Ireland, futhi akungenxa yokuthi ukhethe lawo mazwe, kepha kungenxa yokuthi banikela ngezintela ezinhle kakhulu, ngesilinganiso sangempela esisebenzayo esingu-0,005% (into kwamanye amazwe engenakwenzeka ngokuphelele ).
Futhi khumbula ukuthi izinkampani ezinkulu zingaletha inzuzo enkulu emadolobheni, hhayi kuphela ngokwezabasebenzi, kodwa nakweminye imikhakha engaba nentshisekelo futhi ehlobene ngqo noma ngokungaqondile nayo. Ngendlela yokuthi isiza umnotho waleyo ndawo (yingakho befuna ukwenza izinto zibe lula (futhi zishibhe) ngangokunokwenzeka kuleyo nkampani).
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izintela » Ukulahlwa kwentela